Zvinhu zvinomwe nezveCovid-19 zvinoshungurudza vatungamiriri vebhizinesi zvakanyanya
London (CNN Bhizinesi) Kuderera kwenguva refu ndiko kushushikana kukuru kune vabati vekambani pavanofungisisa kudonha kubva padenda re coronavirus. Asi pane zvimwe zvakawanda zvinoita kuti varambe vakamuka usiku. Vatongi vane basa rayo kuziva njodzi vari kunetsekawo ... Verenga zvimwe »
Girazi nemagirazi akatumirwa kunze kwenyika zvakawana madhora mazana matanhatu nemakumi mashanu emadhora emadhora muna 2019. Mari iyoyo yemadhora inoratidza 12%% yevatengesi vezvigadzirwa mukati memakore mashanu anotangira muna 2015 apo kutumirwa kwezvinhu izvi kwaikosha madhora mazana manomwe nemakumi mapfumbamwe emadhora. ... Verenga zvimwe »
China yekudyara girazi indasitiri inosimudzira kukura kwakasimba muna 2019
China yekudyara ndiro girazi indasitiri yakanyoresa kuvandudza yakagadzikana gore rapfuura pakati pekuedza kudzamisa kunowanika-parutivi mamiriro ekushandura, sekureva Ministry of Industry and Information Technology (MIIT). Muna 2019, kubudiswa kwegirazi remahara kwakawedzera mamirioni mazana mapfumbamwe emamiriyoni eremu, kusvika pa6,6 muzana gore ... Verenga zvimwe »
Yekutarisa kwehupfumi: Zvinotumirwa kuChina zvinotumira muna Kubvumbi pakati peCOVID-19 kutonga
BEIJING, Chivabvu 7 (Xinhua) - kutengeswa kwezvinhu kunze kwenyika kuChina zvakawedzera munaKubvumbi, zvichizowedzera kune chiratidzo chekuti kutengeserana kwenyika yekune dzimwe nyika kuri kugadzikana pakati pechimwe chinhu cheCCID-19. Zvinhu zvinotengeswa kunze kwenyika zvakakwira 8.2 muzana pagore kusvika 1.41 trillion ... Verenga zvimwe »
Iyo 127th Canton fair ichaitwa online mukatikati-kusvika-kunopera June
Nguva yekutumira: Chivabvu-06-2020
Sekureva kweChinese State Council musangano mukuru muna Kubvumbi, 7, 2020, vachipokana nedenda renyika, musangano wakasarudza, iyo 127th Canton Fair yakaitwa online online kusvika pakupera kwaJune kukoka kuratidzwa kwepamhepo .. Verenga zvimwe »
About Borosilicate Girazi
Nguva yekutumira: Kubvumbi-26-2020
CHII chinonzi BOROSILICATE RAHARA? Borosilicate girazi imhando yegirazi ine Boron trioxide iyo inobvumira kune yakaderera kwazvo coeff kukwana kwekupisa kwemafuta. Izvi zvinoreva kuti hazvizopaza pasi pekushisa kwakanyanya kuchinja kunge girazi rinowanzo. Kusimba kwayo kwaita kuti i ... Verenga zvimwe »
China haina kutambisa nguva mukutambisa tsvina
Nguva yekutumira: Kubvumbi-20-2020
Kuita misoro yakati wandei uye kutora internet nedutu nemafashamu memes uye nekuchenjera quips, "kurongedza marara," izwi rinoratidzika kunge riri pamiromo yemunhu wese kuChina, nderimwe rematanho gumi pagore ezvinyorwa zvinonyanya kushandiswa kubata vezvenhau. muna 2019, maererano ... Verenga zvimwe »
Chine mhiko dzekutsigira mafemu ekutengesa ekunze sezvo hutachiona hunokanganisa hupfumi hwenyika
BEIJING, Kubvumbi 9 (Xinhua) - China yakavimbisa rutsigiro kuenderera mberi nekubatsira kambani dzayo dzekunze dzekutengesa nekudzikisira migariro yeCCIDID-19 pachikamu ichi sezvo hutachiona hwakarova hupfumi hwenyika pamwe nekutengeserana kwenyika, Ministry of Commerce (MOC) yakati neChina. Izvo zvinoshandiswa kunze kwenyika uye zvinotengesa kunze ... Verenga zvimwe »
Ongororo pfupi pfupi yezvazvino mamiriro uye tarisiro yekurasa girazi rekudzokorora indasitiri muChina
Kana guta redu riine "mugodhi" wezvinogadziriswazve, girazi remarara ndiro rinonyanya kudiwa zvicherwa mumugodhi. Tsvina girazi ndechimwe chezvinhu zvakaomarara kugadzirisa marara emumaguta. Izvo zvakare zvinodhura kutakura nekupisa, uye hazvigone ... Verenga zvimwe »
Inobudirira Chinese Anti-COVID19 Virusi Mazano
Nguva yekutumira: Kubvumbi-01- 2020
Mumwedzi miviri yakapfuura muChina, isu tinotevedzera aya matipi ekudhonza kuburikidza. Zvino tinovimba aya matipi anogona kubatsira chero munhu anoda. 1.Hakazvidze pahutachiona. 2.Always vanopfeka anodzivirira kumeso kumeso. 3.Zve chero zviratidzo, enda kuna chiremba pakutanga. 4.Kana kuungana, kugara kumba. 5.Kana uchinyura, vhara muromo wako ... Verenga zvimwe »
Nguva yekutumira: Dec-23-2019
Yakanga iri 2002. Tiri kutsvaga emhando yepamusoro yekudya girazi emidziyo uye lids pamitengo inonzwisisika, asi zvinosuwisa kuti isu hatina kuwana imwe. Uye isu takawanawo kuti makambani mazhinji sesu panguva iyoyo aive mune dambudziko iri. Naizvozvo, isu takasarudza kubatsira mabhizinesi akadaro kugadzirisa dambudziko iri uye nyeredzi ... Verenga zvimwe »